डि’भोर्स पछि सामन्थाले लेखिन यस्तो भावुक पोस्ट ! – Online Khabar 24
डि’भोर्स पछि सामन्थाले लेखिन यस्तो भावुक पोस्ट !
October 9, 2021 October 9, 2021 by admin admin
दक्षिण भारतीय फिल्मकी अभिनेत्री सामन्था प्रभु अक्कि’नेनी यतिबेला आफ्नो र नागा चैतन्यसँगको डिभो’र्सका कारण चर्चामा छिन् ।
विवाह ब’न्धनमा बाँधिएको ४ वर्षमै उनीहरुले वैवाहिक स’म्बन्ध टुं’ग्याउने निर्णय गरेका हुन् ।
तेलुगू इन्डस्ट्रीमा उनीहरुलाई ‘आदर्श जो’डी’ भ’निन्थ्यो । यो जोडीको डिभो’र्सको खबर अझै धेरैले पत्याउन सकेका छैनन् । एकातिर सामन्थाको वैवाहिक जीव’न अ’न्त्य भएको छ भने अर्कोतिर उनीमाथि विभिन्न खाले आ’रोप लागेका छन् ।
यस्तैमा उनले आफूमाथि लागेका आ’रोप’हरुको खण्ड’न गरेकी छन् । इन्स्टाग्राम पोस्टमा सबै समर्थकलाई धन्यवाद दिँदै उनले लेखेकी छन्, ‘मेरो यो नी’जि नो’क्सानमा तपाईंहरुको भाव’नात्मक आ’बद्धताले मलाई खुसी दिएको छ । मसँग ग’हिरो सं’वे’दना राख्नेहरु प्रति आभारी छु ।’
आफूमाथि लागेको आ’रोप’को बारेमा उनले अगाडि लेखेकी छन्, ‘मलाई ब’च्चा चा’हिएको थिएन, म अवस’र’वादी हुँ र मेरो अ’बोर्सन भएको छ भन्ने खालका अफ’वाह फैला’इयो । तर, यो कोही किन सम्झँदैन कि डि’भोर्स आफैंमा एउटा द’र्द’नाक प्रक्रिया हो । मलाई यो मु’श्किल घ’डीको सा’मना आफैंलाई गर्न दिनुहोस् । तर, म वाचा गर्छु कि यी कुनै प्रकारका अफ’वाहले मलाई टु’ट्न दिने छैन ।’
नागा चैतन्य र समान्थाले सन् २०१७ मा बिहे गरेका थिए । नागाका पिता तथा साउथ सुपरस्टार नागार्जुनसँग पनि सामान्थाको राम्रो बो’न्डिङ थियो । छोरा र बुहारीको डि’भोर्स भएकोमा दुः’ख व्यक्त गर्दै नागार्जुनले भनेका छन्, ‘भा’री मनबाट यो भन्नु परेको छ कि उनीहरुबीच जे भयो त्यो दुर्भा’ग्यपूर्ण हो । दुवैमा मेरो निकै प्रेम छ । हाम्रो परिवारसँग सैमले विताएका क्षण कहिल्यै भुल्ने छैन । यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevतपाईलाई छिटो–छिटो पिसाब लाग्ने समस्या छ ? यसरी घरमै उपचार गर्नुहोस्
nextपरिवार खुशी राख्न जगारीको सिलसिलामा कुवेत पुगेका सरद परियार उतै अस्ताय !